मन्दिर जस्तो पवित्र स्थलमा अस्लिल यौनजन्य चित्रकला किन कुदिन्छन ? यी हुन ६ कारण | Ujyaalonetwork.com
मन्दिर जस्तो पवित्र स्थलमा अस्लिल यौनजन्य चित्रकला किन कुदिन्छन ? यी हुन ६ कारण
यौनलाई मानिसहरु व्यक्तिगत कुरा मान्ने गर्दछन् । त्यसैले यो गुपचुपकै विषय मानिँदै आएको छ । प्राय मानिसहरु यौनसाथी बाहेक बाहिरी मानिससँग यौनको कुरा गर्नु उचित मानिदैन । तर, कुरा पनि गर्न नमिल्ने यस्तो विषय किन मन्दिर जस्तो पवित्र स्थलमा कुदिन्छन् होला ? मन्दिरमा छाना अड्काउने काठहरु तपाईँहरुले याद गर्नुभएको छ ? र तीनमा भएका यौनिक चित्रकला ? मन्दिरको माथिल्लो भागमा याद गर्नु भएको छ भने नेपाली शैलीका मन्दिरमा गारोको भागबाट ४५ डिग्रीको कोणमा छाना अड्याउन एक विशेष काठको प्रयोग नदेख्ने कुरै भएन । त्यसैलाई टुडाल भनिन्छ ।
तर, टुडालमा जे देख्नुहुन्छ त्यसले भने तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । खासमा टुडालको एकमात्र उद्देश्य छानो दरिलो बनाउने हो तर त्यसमा राखिएका यौन दृश्य भने सबैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । प्याकोण वा प्यागोडा शैलीमा बनाईने मन्दिरका छानामा बढी माटाका टायलहरुको प्रयोग हुनेहुँदा बर्खा याममा पानीले पर्खालहरु गल्ने र भत्किने डरले प्रयोग गरिने दरिला काठमा यौनका कलाकर्म देखाउने कुनो कसरी बन्न थाल्यो ? यो सबैको चासोको विषय हो । सुरुमा टुडालमा शरीरका विभिन्न मोडका मात्रै आर्कषक कलाहरु बनाइन्थ्यो । हिन्दु धर्ममा यसरी तले मन्दिरका टुंडालमा कला कुद्ने काम भने बौद्ध धर्मबाट आएको मानिन्छ । पहिले–पहिले वनदेवीले भिक्षुुहरुको रक्षा गरेको र पछि हिन्दु संस्कृतिमा वनदेवीलाई कालाभाञ्जिकाकै स्वरुप मानियो । कालाभाञ्जिकाले आफ्ना मान्छेलाई रुखका हाँगामा बसेर सुरक्षा दिन्छिन् भन्ने विश्वास भएका कारण मन्दिरको माथिल्लो भागमा ४५ डिग्री बनाएर रुखकै हाँगामा झुण्डिएजसरी मूर्ति कुद्न थालियो । त्यतिबेलासम्म मन्दिरमा यसरी यौनक्रिडाका विभिन्न आसनहरु सहितका कला देख्न पाइदैनथ्यो । तर, १३ औं शताब्दीमा पनौतीमा निर्माण भएको इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरको टुडालमा भने कामुक कलाको प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
४ – एक पल्ट पन्धैं शताब्दीतिर मल्लकालिन एकजना राजा एकाएक दरबारबाट गायव भएछन् । उनको चारैतिर खोजि भयो । दरबारमा हाहाकार मच्चियो । तर, राजा भेष बदलेर देश भ्रममा निस्केका छन्, जनताको दुःखसुखलाई बुझ्नकालागि उनी गुप्त यात्रामा रहेछन् । राजा लामो समयसम्म नै फर्केनन् । राजाको अनुपस्थितिमा दरबारभित्र अनेक प्रकारका विकृृतिहरु बढ्न थाले । भारदार, सेना, दासदासी र रानीहरुका बीचमापनि अव्यवस्था देखिन थाल्यो ।
दरबारभित्रको कुरा बाहिर त्यति थाह नहुने भएपनि अति भएपछि पोखिनु स्वभाविक थियो । दरबारभित्रको चर्तिकला सबैतिर व्याप्त ‘दरबारभित्र दिनदिनै यौनमय वातावरण हुर्किदै गएछ । रानीहरु, दासीहरु, भारदार र सेनाहरुकाबीच उठबस गर्दागर्दै यौनसम्बन्ध व्यापक हुन थालेछ । दरबार दिउसै यौन भवन जस्तो बन्न थालेछ । सामान्य यौन संबन्धले नपुगेर अनेकौं कामसूत्रीय आसनहरुको अभ्यास हुन थालेछ । दरबारभित्र सिकेका दासी र सेनाहरुले आफ्ना घरमा पतिपत्नीहरुका बीचपनि फैलाउँदै लगेछन । दासीले आफ्नो पतिलाई र सेनाले आफ्ना पत्नीलाई सिकाए । भारदारहरुले पनि घर घरमा त्यसलाई फैलाउदै लगे । यस्ता नयाँ–नयाँ असनहरुका नयाँ नया अभ्यास र आविष्कार पनि हुन थालेछ । दरबारबाट शुरु भएको यो यौन अभ्यास देशैभरि व्याप्त भएछ ।
दिनदिनै नयाँ नयाँ पाराको यौन अभ्यासबाट सिक्ने सिकाउने क्रममाः साधारण सिपाहीपनि रानीको ओछ्यानसम्म पुग्न थालेछ । यौनको यो स्वच्छन्दताले देशनै यौनकुञ्ज जस्तो बन्न पुगेपछि दरबार भित्रै समाजलाई यसबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने छलफल शुरु भएछ । लामै छलफल र सोचपछि यसलाई लुकाएर र दबाएर समाधान हुँदैन । यसको सार्वजनिक प्रदर्शन र प्रचार गर्नुपर्छ, जसबाट मानिसमा मानसिक बित्रिष्ण उत्पन्न हुन्छ र यो आवश्यकीय र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्केछ । अनि काठमा, माटोमा, धातुमा जे–जेमा हुन्छ यौनबद्धक आकृतिहरु सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्नु भन्ने आदेश भएछ । त्यसपछि कलाकारहरुले आ–आफ्ना कलालाई यौनसौन्दर्यतिर मोडेछन । त्यसैबेलादेखि सार्वजनिक स्थलहरुमा, मठमन्दिरहरुमा, जहाँ–जहाँ मानिसको विशेष उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ यस्ता यौन आकृति स्थापना गर्न थालिएको जनविश्वास छ ।
बिरामीलाई सास्ती,मेसिन बिगार्दै निजिमा पठाउदै विर अस्पताल
प्रधानमन्त्री ओली सोमबार नेपाल फर्कने
के आर्यन दीपिकासँग काम गर्न तयार होलान् ?
मात्र १ इन्चको स्क्रिन भएको विश्वको सबैभन्दा सानो ल्यापटप
ट्याक्सी ड्राइभरद्धारा मोडल पूजाको हत्या
गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको बन्दै कांग्रेसले गरे संसद अवरुद्ध
कांग्रेस सभापति देउवा सोध्छन्, ‘ प्रतिपक्षले के बोल्छ भनेर प्रधानमन्त्री डराइहाल्ने ?’
अबिरल बर्षाको कारण सिरहामा तरकारीको मूल्यमा वृद्धि
सरकारले टेलिफोन ट्यापिङ गरेर विरोधीहरुलाई तह गर्न खोज्यो : देउवा
सर्वोच्चमा अनसन बसेर मर्न तयार छौं